एक वस्तु केटीको शरीरको7रहस्यहरू! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
एक वस्तु केटीको शरीरको7रहस्यहरू!
घर स्वास्थ्य डाइट फिटनेस डाइट फिटनेस ओआई-अन्वेश द्वारा अन्वेषा बरारी | प्रकाशित: शुक्रवार, डिसेम्बर,, २०१२, १:4::48 [IST]
हामी के सोच्छौं जब हामी मलाइका अरोड़ा खान 'मुन्नी बदनाम' को पिट्ने नाच देख्दछौ वा क्याक्रिना कैफलाई 'चिकनी चमेली' को स्वरमा झुक्दैछन्? प्रत्येक महिलाले यी सुपर हॉट आईटम केटीहरू जस्तो घुमाउरो शरीर पाउने आशा गर्दछ। यी महिलाहरू प्रत्येक पुरुषको कल्पनाको प्रतीक हुन्। हामी उनीहरूलाई अनुहार भरी भन्न सक्छौं र उनी जस्तो पोशाक लिन चाहँदैनौं, तर हामी निश्चित रूपमा उनीहरू जस्तो घुमाउरो शरीर चाहन्छौं।
एक वस्तु केटी एक मोडेल होईन। त्यसोभए, तपाईं यी डिभा जस्तो देख्नुहुनेछैन मात्र वजन घटाएर। तपाईंले भ्यागुता देख्नको लागि तपाईको शरीरलाई स्कर्ट गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं घुमाउरो शरीर जस्तो आइटम केटी पाउन चाहनुहुन्छ भने, यी कसरत प्रयास गर्नुहोस्।
कसरी गर्भावस्था तौल छिटो खोल्ने
१. फिट तर मोटो छैन: आइटम केटी कहिल्यै स्कीनी हुँदैन, उनी भोकले भरिएको छ। यदि तपाईं यी डिभास जस्तो शरीर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो शरीर मा केही मासु हुनु पर्छ। त्यसोभए, भोकाएको मूर्खतापूर्ण आहारहरूमा नजानुहोस्।
२. सामान्य कार्डियस गर्नुहोस्: तपाईंले ट्रेडमिलमा घण्टा सम्म चलाउन आवश्यक छैन जबसम्म तपाईंसँग २० पाउन्ड हराउनुपर्दैन। तपाईं भर्खरै एक गर्मीमा जान र केही क्यालोरीहरू जलाउन जानुहुन्छ।
But. पुतली लिफ्टहरू: एउटा वस्तु केटीको शरीरको सार एक स्वादिष्ट रूपमा भारी बोसो हो। तपाई सजिलैसँग एउटा पुतली लिफ्टहरू द्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक बेन्च मा फ्लैट झूट। तपाईंको दुबै हातहरूमा डम्बेलहरू समात्नुहोस् र तिनीहरूलाई सिधा माथि पार्नुहोस्। तिनीहरूलाई तल ल्याउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको छाती भर डम्बेलहरूमा सामेल हुनको लागि तपाईंको कुहिनो फोल्ड गर्नुहोस्।
हातको हत्केलामा एउटा अक्षर
Ho. हुपलास: एक आकर्षक डिभा एक वक्र शरीरको साथको एक साँघुरो कम्मर भएको छ। तपाइँको कमरलाई कम गर्न तपाइँ हुपला रिंगहरूसँग अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको लचिलोपनलाई सुधार गर्दछ र कम्मरबाट फ्याट कम गर्न मद्दत गर्दछ।
But. बटन अभ्यास: छाती बाहेक, तपाईंको कम्मर राम्रा गोलो हुनु पर्छ। त्यसो भए, चरण अप अभ्यास गर्नुहोस्। एक उठाएको प्लेटफर्ममा कदम र फेरि तल कदम। वैकल्पिक खुट्टाको साथ यसलाई दोहोर्याउनुहोस्। तपाईको नितम्ब आकार दिनको लागि अर्को व्यायाम तन्काइएको छ।
Leg. खुट्टा लिफ्टहरू: धेरै महिलाहरु आफ्नो खुट्टा मा ध्यान केन्द्रित कसरत गर्न आवश्यक छ। यसको कारण हामी शरीरको तल्लो आधामा फ्याट जमाउँछौं। तपाईंको खुट्टालाई हावामा माथि उठाउनुहोस् र तल झर्नुहोस्। एकैचोटि १ 15 गणनाको लागि यसलाई दोहोर्याउनुहोस्।
Dance. नृत्य कक्षाहरू: कुनै पनि प्रकारको नाचले तपाईलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। त्यसोभए जब तपाईं नृत्य दिवा नक्कल गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यो नृत्य वर्गमा सामेल हुनको मतलब छ। यस सम्बन्धमा बेली डान्स र सालसा सबैभन्दा लाभदायक नृत्य रूप हो।
यी आइटम गर्ल जस्ता कर्वी बडी बनाउनको लागि उत्तम तरिकाहरू छन्। तपाईंसँग थप्न कुनै सल्लाह छ?
टाइगर अमेजन क्विजको सब भन्दा ठूलो उप-प्रजाति
कसरी निर्जला एकादशी छिटो गर्ने
गुलाबी बनाउनको लागि ओठको लागि घरेलु उपचार
कसरी पेठे की सब्जी बनाउने
मेरो पतिलाई पहिलो विवाहको बधाई हो
रातमा पतिलाई कसरी बहकाउने